အသုံးပြုမှုများအတွက်လိုင်စင် – အဆိုပါ Tailoress
Tailoress®ပုံစံများအားလုံးသည်aကိုထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည် အများဆုံး 50 ရောင်းရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဝတ်များ / ပစ္စည်းများ. ပိုမိုထုတ်လုပ်ရန် ကျေးဇူးပြု၍ အခြားလိုင်စင်ထပ်မံတိုးရန်ပုံစံကိုပြန်လည်ဝယ်ယူပါ 50. ဒီကန့်သတ်ပုံစံများအသီးအသီးအစုသက်ဆိုင်သည်, စုစုပေါင်း 50 ပစ္စည်းများကိုပုံစံအရွယ်အစားမတူညီသောထံမှ လုပ်၍ ရောင်းချနိုင်သည်. ဥပမာ: Bella Pajama အရွယ်အစား 7-12 ခွေးများအဘို့, အများဆုံး 50 စုစုပေါင်းပစ္စည်းများ, မဟုတ်ဘူး 50 ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကိုအရွယ်အစား.
ပုံစံများ, ပူးတွဲပါပုံစံဖိုင်များနှင့်၎င်းတို့၏ download link များဖြစ်ကြသည် ဝယ်ယူသူ၏တစ် ဦး တည်းသောအသုံးပြုမှုအတွက်တင်းကြပ်စွာနှင့်မျှဝေသို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်ဖြန့်ဝေမည်မဟုတ်ပါ, လွတ်လွတ်လပ်လပ်သို့မဟုတ်ဘဏ္compensationာရေးလျော်ကြေးများအတွက်.
ပုံစံအားလုံးနှင့်၎င်းတို့နှင့်အတူတွဲဖက်ဖိုင်များဖြစ်သည် တင်းကျပ်စွာ The Tailoress®၏မူပိုင် နှင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်မပြုစေခြင်းငှါ (မူရင်းသို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာပုံစံ) ကိုယ်ထိလက်ရောက်ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်း, ဒီဂျစ်တယ်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်.